သွေးလည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်သက်ဝင်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း (၅)ခု - Lifestyle Myanmar
သွေးလည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်သက်ဝင်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း (၅)ခု
ကျန်းမာသော အလေ့အထတစ်ချို့ကို ကျင့်သုံးခြင်းက နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်သက်ဝင်စေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းက ခြေထောက်တွေကို သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး သွေးစီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင့်သွေးလွှတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြောကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ထို့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှု ရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကိုလက်စထရောကို လျှော့ချဖို့နင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ အားကစားရုံသွားပြီး လုပ်စရာမလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အိမ်မှာပဲ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်းရဲ့ အရေးပါမှုက ဘာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအားလုံးက အကောင်းဆုံး အခြေအနေများမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းခြင်းပေါ်မှာ မှီခိုနေပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ််စေ ၊အတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့အခါ ဘဝအရည်အသွေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပြင်းထန်သော ရောဂါများ (သို့) ဖျားနာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်းက အောက်စီဂျင်နှင့် အာဟာရ စီးဆင်းမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမှာ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်၊
ဘာက သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ?
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
ပြည့်ဝဆီနှင့် trans အဆီများကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်း
ကိုလက်စထရောမြင့်မားသော ပြဿနာများ(သို့) ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း
အရမ်းတင်းကျပ်လွန်းတဲ့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း ၅ခုနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းပါ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ပြုလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက သွေးစီးဆင်းမှုကို လှုံ့ဆော်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်အလေ့အထရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းကို စတင်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ခြေထောက်တွေကို မြှင့်တင်ပါ
သင့်ခြေထောက်တွေကို မြှင့်တင်ခြင်းဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို အားကောင်းစေသလို အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ သွေးကြာပိတ်တာတွေကို ကူညီနိင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ (သို့) အိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းပါ။ ခြေထောက်တွေကို မျက်နှာကြက်ဆီသို့ မြှောက်လိုက်ပါ
ဒီအနေအထားတိုင်း စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှ ကြာအောင် ထိန်းထားပါ။ ဒူးကို ကွေးပြီး ခြေထောက်တွေကို တဖန် ဆန့်ထုတ်ပါ။
relax ဖြစ်တဲ့အထိ ၁၅ကြိမ်ကနေ အကြိမ် ၂၀ကြားပြုလုပ်ပါ။
၂။ Seated bicycle
စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သွေးလည်ပတ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း စက်ဘီးစီးသလို သင့်ခြေထောက်တွေကို လှုပ်ရှားခြင်းကလည်း အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းက သင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး နှလုံးသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကိုလည်း တိုးစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို ၃ချိုး၂ချိုး အနေအထားမျိုးထိုင်ပြီး လက်ကိုခေါင်းနောက်မှာထားပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်း၍ ကျန်တစ်ဖက်ကိုထောင်ထားပါ။ နောက်ဘယ်၊ ညာအလှည့်ကျ ခါးကိုကွေးညွတ်လိုက်ပါ။
သင့်ခြေထောက်တွေကို အနည်းငယ်မြှောက်ပြီး တစ်မိနစ်လောက် စက်ဘီးတစ်စီး နင်းသလို ရွေ့လျားမှုကို စတင်ပါ။
သင့်ခြေထောက်တွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ် မကျအောင် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျုံ့ထားပါ။
တစ်မိလျှင် ၂ကြိမ် (သို့) ၃ကြိမ်လုပ်ပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ဖနောင့်နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ ခြေဖျားထောက်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ဖနောင့်တွေကို ကြွထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုက သင့်သွေးစီးဆင်းမှုကို ပြန်လည်အသက်ဝင်စေပြီး အချိန်နှင့်အမျှ သင့်ကြွက်သားများကို ပိုသန်မာစေပါတယ်။
ဝိတ်တုံးအသေး၂ခုကို လက်ကကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ခြေဖျားတွေပေါ်မှာ ဖိအားထားပြီး ဖနောင့်တွေကို မြှောက်ပါ။
ဒီအနေအထားမှာ ၃စက္ကန့်၊ ၅စက္ကန့်လောက်နေပြီး မူလအနေအထားသို့ ပြန်သွားပါ။
၁၅ခါ ၊ အခါ ၂၀လုပ်ပါ။
ခြေလှမ်းလှမ်းတာက သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက သင့်ရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေပေါ်မှာ ဖိအားလျော့စေသော ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကူညီပေးတဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သွေးစီးဆင်းမှုကို အထောက်အကူပြုပြီး ခြေထောက် ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ခုံတန်းရှည်တစ်ခု (သို့) သင်တတ်လို့ရနိုင်မယ့် အဆင့်တစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။
ခုံတန်းပေါ်မှာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို တင်ပြီး တစ်ဖက်ကို မြေပြင်ပေါ်မှာ ထားပါ။ ခုံတန်းပေါ်က ခြေထောက်ကို အားထည့်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပါ၊
ခြေထောက်ကို ဟိုဘက် သည်ဘက်ပြောင်းပြီး ၁၅ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
၅။ Leg separation
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ (သို့) အိပ်ယာ (သို့) ယောဂဖျာလို သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခုလုပ်ဆောင်မယ့် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် သင့်နှလုံးဆီသို့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်ရှိ သွေးစီးဆင်းမှုက တိုးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါက varicose သွေးပြန်ကြောရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းပြီး မျက်နှာကျက်ကို ကြည့်ပါ။
ခြေထောက်တွေကို တန်းတန်း မြှောက်ထားပြီး ကြမ်းပြင်သို့ မထိစေဘဲ တစ်ဖက်စီ ခွဲထားပါ။
ခြေထောက်တွေကို ပြန်ပူးပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၅ကြိမ်မှ အကြိမ် ၂၀လုပ်ပေးပါ။
သင့်ခြေလက်တွေ လေးလံနေပါသလား၊ သွေးပြန်ကြောတွေ ရောင်ရမ်းနေတာကို သတိပြုမိပါသလား? ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာတွေ မခံစားရတောင် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အရမ်းအကျိုးရှိသလို မြန်ဆန်လွယ်ကူပါတယ်နော်။